Iska horimaad ka dhacay maanta magaalada Djibooti ayaa waxaa ku geeriyooday dad rayid ah – STAR FM SOMALIA
In ka badan 10 qof oo shacab u badan, ayaa waxaa maanta lagu dilay Magaalada Djibouti, ka gadaal markii iska horimaad ay la galeen Ciidanka Booliska Jamhuuriyadda Jabuuti.
Ciidamada Booliska, ayaa saakay weerar ku qaaday goob ay ka socotay Xuska Mowliidka Nabiga (NNKH), iyadoo ay Boolisku iska caabin xoogan kala kulmeen dadkii ay ugu taggeen halkaasi.
Taliyaha Ciidamada Booliska Jabuuti, C/laahi Cabdi Faarax, ayaa wuxuu xaqiijiyay in ay Ciidamada Boolisku ay gaareen goobtaasi, balse ay ugu taggeen wax aanay ka filleynin.
Taliyaha, ayaa sheegay in dad la soo abaabulay ay dagaal kala horyimaadeen Ciidanka Booliska, isla-markaana ay Boolisku iska caabin sameeyeen.
Taliyaha oo la hadlay Laanta afka Somaliga ee BBC, ayaa waxaa uu sheegay in mucaaradku ay soo abaabuleen dadkaasi, wuxuuse ku cago jugleeyay inay Maxkamad la tiigsan doonaan.
Mid ka mid ah Ciidamada Booliska, ayaa waxaa la sheegay in iska horimaadkaasi uu ku dhintay, halka tiro kalana ay ku dhaawacantay.